Homeसमाचारनौ महिनाकी छाेरी छोडेर आमा भा’गिन्, घरमा पुग्दा छाेरीको रुवा’बासी (भिडियो सहित)
April 2, 2021 admin समाचार 3638
नौ महि’नाको सानी छोरी छो डेर आमा घर बाट भा गि न। प्रेम बिबाह गरेर भागेको जोडी २ बर्ष न पुग्दै छु’टिन पुग्यो। आमाको काखमा रमाउने ,काख मै निदाउने छोरीको के गल्ति थियो होला र ? श्रीमान भन्छन अरु’मा कम भए पनि लाउन, खान मा कमि थिएन । राम्रै होस् जहाँ गए पनि खुसि नै रहोस भन्दै श्री’मानले दुख बेसाए ।
नौ महि’नाको यति सानो छोरी जस्ले आमानै चिन्दैन त्यहि छोरिलाई छो’डेर आमा घरबाट भा’गिन् । प्रेम बिवाह गरेको जोडि दुई बर्षमै अन्ततः छुट्टि’न पुग्यो। आमाको का’खमा रमाउने आमाकै काखमा निदाउने यी नौ बर्षिय छोरि’को के नै ग’ल्ति थियो होला र ? श्रिमान (दिपेन्द्र बलामि) बता’उछन् कि लाउन खानको कमि त थिएन तर त्यो भन्दा बढि चै थिएन पनि मैले दिन पनि सकिन ,जहाँ गएकि छौ तिमी खुसि हुनु भन्छन् श्रिमान् ,बि’चरा ।
घर- झ’गडा सबै’कोमा अवश्य हुन्छ ,त्यो पनि भएको हो या हैन हामी त जान्दैनौ म’नमु’टाव कमि क’मजोरी दुबैबाट भएको होला तर त्यस्को स’जाय यति सानि फुल जस्ति छो’रिलाई किन दिन्छौ ,बिन्ति छ फर्कि आउ बहिनी । इताजा खबरबाट
October 4, 2020 admin समाचार 9006
August 30, 2021 admin समाचार 3555
June 23, 2021 admin समाचार 2416